Umbiko Wezomthetho Wamalungelo OFakazi BakaJehova | INcwadi Yonyaka Ka-2014
Umphostoli uPawulu wanxusa amaKristu: “Hlalani nibakhumbula labo abasezibophweni zasetilongweni njengokungathi niboshwe kanye nabo.” (Heb. 13:3) Njengezinceku zikaJehova, sihlale sibakhumbula abafowethu nodadewethu abathembekile futhi sithandazele “bonke abasezikhundleni eziphakeme; ukuze siqhubeke siphila ukuphila okuzolile nokunokuthula ngokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu okuphelele nokungathathi izinto kalula.”—1 Thim. 2:1, 2; Efe. 6:18.
Lo mbiko olandelayo umayelana namacala oFakazi BakaJehova abathweswa wona kulo nyaka odlule:
Abafowethu eRussia bayaqhubeka “ngaphandle kokuyekethisa, befundisa futhi bememezela izindaba ezinhle” naphezu komkhankaso oqhubekayo wokusiyekisa umsebenzi wokushumayela owenziwa iSonto Lobu-Orthodox LaseRussia nezinye izikhulu zikahulumeni. (IzE. 5:42) Iziphathimandla zaseRussia ziyaphikelela nokusebenzisa kabi umthetho ongezwakali wokuthi siyeqisa, ekuqaleni owawusungulelwe ukulwa nobuphekula. Manje ususetshenziswa kabi ezincwadini zethu nakubafowethu. Ngenxa yalokhu, izinkantolo zaseRussia ziye zathi izincwadi zethu ezingaba ngu-70 zinezinkulumo ezeqisayo, futhi izikhulu zikahulumeni zizifake ohlwini lwezincwadi ezivaliwe. Ngenxa yalokho abakushoyo, ezinye iziphathimandla zalapha ziyafika zipequlule amaHholo OMbuso nemizi yabafowethu zifunana nezincwadi. Amaphoyisa abopha, athathe izithombe nama-fingerprint oFakazi abaningi abasuke beshumayela. Izikhathi eziningi azama ukwesabisa abafowethu ngenkathi esabaduvise esiteshini samaphoyisa.
Ekuqaleni kuka-May 2013, abafowethu nodadewethu abangu-16 edolobheni laseTaganrog bathethiswa icala lokuhlela ukuba kube nemihlangano yobuKristu, ukuya kuyo, ukuba nengxenye kuyo nokushumayela. Kuyaqala ngqa ngemva kokuwa kweSoviet Union ukuba oFakazi bathweswe amacala ngenxa yokwenza izenzo zokholo. Kwezinye izindawo eRussia iziphathimandla zizama ukwenza izinkantolo ukuba zilahle izincwadi zethu ngecala lokweqisa futhi zibeke abafowethu icala lokuzonda ezinye izinkolo.
Izimo zabafowethu nodade e-Eritrea azikashintshi. Ngo-July 2013, babengu-52 abasejele, kuhlanganise nabafowethu abangu-8 abaneminyaka okungenani engu-70 kanye nodade abayisithupha. Abazalwane abathathu, uPaulos Eyassu, u-Isaac Mogos noNegede Teklemariam, bebelokhu besejele kusukela ngo-September 24, 1994, ngenxa yokungayi empini.
Bangaphezu kwesigamu ababoshelwe ejele laseMeiter, elisogwadule olusenyakatho yenhloko-dolobha i-Asmara. Kusukela ngo-October 2011 kuya ku-August 2012, iziphathimandla zajezisa abafowethu abangu-25 ngokubafaka esakhiweni sikathayela esingxenye yaso ingaphansi komhlaba. Ehlobo onogada badedela iziboshwa emini ukuze zibalekele ukushisa kukathayela. Noma kunjalo azikutholi ukudla namanzi anele, ngakho ziyagula. Ngokudabukisayo, uYohanne Hail, umzalwane oneminyaka engu-68, washona ngo-August 2012 ngenxa yalokhu kungaphathwa kahle, njengoba nje kwenzeka nakuMfoweth’ uMisghina Gebretinsae ngo-2011.
Ukwenqaba Imisebenzi Ethile Ngenxa Kanembeza
Isekelwe ku-Isaya 2:4 noJohane 18:36.
Ngo-November 27, 2012, i-ECHR yakhipha isinqumo esivuna uKhachatryan nabanye ecaleni elaliphakathi kwabo ne-Armenia. Uhulumeni wayebeke oFakazi abangu-17 amacala angekho ngenxa yokwenqaba imisebenzi yokusiza umphakathi ngaphansi kokuqondiswa ibutho lezempi. I-Armenia ikhokhele abafowethu isinxephezelo kanye nezindleko zecala ngenxa yalesi senzo esingemthetho.
Naphezu kwalesi sinqumo esivuna uKhachatryan nesinqumo esiwumhlahlandlela ecaleni lika-Bayatyan ne-Armenia, nazo zonke izinqumo ezalandela ze-ECHR, uhulumeni waseArmenia waqhubeka ushushisa futhi ugweba intsha engoFakazi ngoba yenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. Nokho ngo-June 8, 2013, uhulumeni wavuma ukuba kwenziwe izichibiyelo emthethweni obizwa ngokuthi i-Alternative Service Law owawubonakala sengathi uzoxazulula inkinga yokuba ibutho lezempi liqondise imisebenzi yokusiza umphakathi. Bonke oFakazi ababeboshelwe ukwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza badedelwa ngo-November 12, 2013, futhi kwavunywa nesicelo sezinsizwa ezingoFakazi sokwenza eminye imisebenzi yokusiza umphakathi.
Ngo-October 31, 2013, babengu-602 abazalwane abasejele. Kusukela ngo-1950, iziphathimandla zaseNingizimu Korea ziye zagweba oFakazi BakaJehova abangu-17 605 ingqikithi yeminyaka engu-34 184 ejele ngenxa yokwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza.
Kuze kube muva nje, oFakazi abaningi ababoshiwe bebehlala nezigelekeqe ezitokisini, ngisho nezigebengu eziyingozi. Kodwa ithimba labafowethu laya kumphathi wezamajele eKorea liyomcela ukuba akhulume nabaqondisi bejele bahlukanise abafowethu kwezinye iziboshwa. Iziphathimandla zejele zasukumela phezulu zahlukanisa iningi labafowethu kwezinye iziboshwa, ngakho ngo-April 2013, okungenani amaphesenti angu-75 abafowethu ababoshiwe bebebane noma bebahlanu esitokisini. Kuye kwabathinta kanjani abafowethu lokhu?
“Asisahlushwa izinto ezinjengokuziphatha okubi nenhlamba,” kusho omunye umzalwane. Omunye wathi: “Manje sesiyakwazi ukukhuthazana futhi siba nayo yomihlanu imihlangano ngesonto.”
Phakathi naleso sikhathi, abalisa abangu-56 abadedelwa kwezempi baba amasosha asebenza ngezikhathi ezithile baba oFakazi bayashushiswa, bahlawuliswe futhi baboshwe ngenxa yokwenqaba ukuya koqeqeshelwa impi. Njengoba bebizwa kaningana ngonyaka kuze kube iminyaka engu-8, lokhu kuhlukunyezwa kubaphatha kabi kakhulu.
Naphezu kokucela kaninginingi ukuba benze imisebenzi yokusiza umphakathi, abafowethu abangu-12 badonsa izinyanga ezingu-39 emunye ekamu eliyijele. Omunye umzalwane udonsa unyaka ejele ngenxa yokwenqaba ukuya empini.
OFakazi besilisa abangu-9 ababoshelwe ukwenqaba imisebenzi ethile ngenxa kanembeza badonsa izigwebo eziyizinyanga ezingu-18 kuya eminyakeni emibili ejele, futhi ngokuvamile onogada namasosha babashaya kabuhlungu. Lapho bededelwa, iziphathimandla zivame ukuphinde zibabophe zithi “abezwa” bese zibaphatha ngesandla esiqinile. Abameli babafowethu abayishumi abenqabe ukuya empini bafake izikhalazo kuyi-United Nations Human Rights Committee.
Benqaba Ukuhlanganyela Emikhosini Yokushisekela Izwe Ngenxa Kanembeza
Isekelwe kuDaniyeli 3:16-18.
ETanzania: Ngemva kokuba zitholwe zingenacala, lezi zingane ezingoFakazi zaqhubeka nokufunda
INkantolo Yokudlulisa Amacala eDar es Salaam, okuyinkantolo ephakeme yaseTanzania, yavumelana ngazwilinye ukuthi kwakungafanele ibhodi yesikole ixoshe abafundi abahlanu, imise nabangu-122 ngenxa yokwenqaba ukucula iculo lesizwe. Esinqumweni esakhishwa ngo-July 12, 2013, inkantolo yaqaphela ukholo oluqotho lwabafundi abangoFakazi nelungelo labo elisekelwa umthetho-sisekelo lokuvikela inkululeko yabo kanembeza nokholo lwabo. Ukuzimisela kwalezi zingane ukuhlala ziqotho kuNkulunkulu kuholele ekunqobeni okuphakamisa igama likaJehova nenkululeko yethu yokukhulekela eTanzania.
Isekelwe encwadini yezEnzo 4:19, 20.
Ukuhlola okwenziwe abantu abathi bangochwepheshe boMnyango Wesifunda Wezenkolo kwathi izincwadi zethu eziningana ziyeqisa, kusikisela ukuthi zidala uqhekeko emphakathini nasezinkolweni. Ngo-April 6, 2013, amaphoyisa edolobheni laseKarabalyk ashaqa izincwadi ngesikhathi epequlula ngokungemthetho emhlanganweni webandla owawusemzini womzalwane. Ngo-July 3, 2013, inkantolo ebizwa ngokuthi i-Astana Economic Court yasekela isinqumo sokuvinjelwa kwezincwadi zethu eziyishumi, okwenza kuqhutshekwe kuhlolwa izincwadi zethu futhi kubekelwa imingcele ukungeniswa kwazo kuleli zwe. Ngaphezu kwalokho, ngo-December 2012, izikhulu zikahulumeni zaqala umkhankaso wokubopha nokugweba abafowethu ngenxa yalokho ezithi umsebenzi wobuvangeli ongekho emthethweni. Ngo-March 28, 2013, inhlangano ebizwa ngokuthi i-Agency for Religious Affairs yatshela i-Regional Religious Center of Jehovah’s Witnesses ukuba itshele oFakazi BakaJehova baseKazakhstan ukuthi kuyicala ukushumayela ngaphandle kwezindawo zabo zokukhulekela. Kusukela ngo-July 2013, iziphathimandla zabeka abafowethu nodadewethu abangu-21 amacala.
Isekelwe kweyamaHebheru 10:24, 25.
Ngo-January 2010 inhlangano ebizwa ngokuthi i-State Committee for Work with Religious Associations yenqaba ukubhalisa kabusha uMphakathi Ongokwenkolo WoFakazi BakaJehova ngenxa yalokho okwakuthiwa amaphutha enziwe esicelweni. Naphezu kwemizamo eminingana yoFakazi BakaJehova yokulungisa lokho okwakuthiwa amaphutha, iziphathimandla zisenqaba ukubabhalisa kabusha. Ngo-July 31, 2012, abafowethu badlulisela lolu daba kuyi-ECHR, bethi uhulumeni wephula inkululeko yethu yokukhulekela lapho wenqaba ukusibhalisa kabusha njengenhlangano engokwenkolo ngaphandle kwezizathu ezingokomthetho. Njengoba bengabhalisiwe, abafowethu abazitholi izinzuzo ezitholwa uma uqashelwa ngokomthetho.
Ukulondeka Nokuphepha Kwabantu Nempahla
Isekelwe kweyabaseFilipi 1:7.
Nakuba oFakazi benenkululeko yokukhulekela e-Ukraine, bayahlukunyezwa, kushiswe amaHholo abo OMbuso noma acekelwe phansi. Abakwasidlodlo abawaphenyi la macala, bangabaqulisi nabantu abawenzile. Akumangalisi ukuthi lokhu kwenza abaphikisi babe nomuzwa wokuthi bangazenza lezi zinto kodwa bangajeziswa. Ngenxa yalokho, buye banda ubugebengu obenziwa kubafowethu ngo-2012 nango-2013. Izigigaba ezinhlanu zokucekelwa phansi nokushiswa kwempahla yoFakazi ngo-2010 zanda zafika ku-15 ngo-2011, zaba ngu-50 ngo-2012, futhi ezinyangeni zokuqala ezinhlanu ngo-2013 zaba ngu-23. Ihhovisi legatsha lizidlulisele kuyi-United Nations Human Rights Committee lezi zenzo zesihluku.
E-Ukraine: Abafowethu balungiselela ukwakha kabusha leli Hholo LoMbuso elacekelwa phansi lashiswa
Isekelwe encwadini yezEnzo 5:29 no–15:28, 29.
Entwasahlobo ka-2012, uPablo Albarracini wayezimele ngesikhathi izigelekeqe zizama ukuphanga, wadubuleka kaningi wayesephuthunyiswa esibhedlela equlekile. Wayesayine ikhadi legazi ayenqaba ngalo ukwelashwa ngemikhiqizo yegazi. Nakuba isibhedlela sasifuna ukuhlonipha isinqumo sakhe esicacile, isihlobo sakhe esingakholwa sazama ukuthola imvume enkantolo yokuba uMfoweth’ u-Albarracini ampontshelwe igazi, sithi ukumpontshelwa igazi kuzosindisa ukuphila kwakhe. Noma kunjalo, iNkantolo Ephakeme Yase-Argentina yavuna uMfoweth’ u-Albarracini, ihlonipha ilungelo lakhe lokusho ukuthi elashwe kanjani nakuba ayequlekile. Akazange ampontshelwe igazi futhi welulama. Wabonga uJehova ngokumsiza ukuba agcine ubuqotho bakhe kulolu daba olubalulekile.
Isekelwe kuLuka 21:12-17.
Ngo-April 16, 2013, inkantolo yenza isinqumo esivuna abafowethu baseToktogul, lapho iHholo LoMbuso lacekelwa khona kabili izakhamuzi. Inkantolo yagweba lezo zakhamuzi yayisithi azikhokhe nesinxephezelo. Njengamanje kuqulwa icala lalabo abacekela phansi iHholo okokuqala, okunikeza ithemba lokuthi izinkinga kuleyo ndawo zizophela. Amabandla azolakha kabusha iHholo LoMbuso.
EKyrgyzstan: Izakhamuzi zalicekela phansi kabili leli Hholo LoMbuso
Ukunqoba Amacala Okuphawulekayo
Inkinga: Kumelwe yini iqembu lenkolo lithole imvume yokuba nemihlangano emikhulu neyebandla?
Isinqumo: Ngo-December 5, 2012, iNkantolo Yomthetho-sisekelo Kahulumeni WaseRussia yaqinisekisa ukuthi uMthetho-sisekelo WaseRussia uyayinikeza inkululeko engokwenkolo futhi yanquma ukuthi abafowethu bangaba nemihlangano ngaphandle kokubika kusengaphambili noma ukucela imvume eziphathimandleni.
Inkinga: Ingabe izakhamuzi zinalo ilungelo lokugcina izindaba eziphathelene nokwelashwa kwazo ziyimfihlo? Okwakwenzekile: Ngo-2007 isekela lomshushisi waseSt. Petersburg, eRussia, latshela zonke izibhedlela kuleli dolobha ukuba zazise ihhovisi lomshushisi ngabo bonke oFakazi BakaJehova abenqaba ukumpontshelwa igazi—kodwa bangatshelwa bona. Lapho izinkantolo zaseRussia zehluleka ukusekela amalungelo eziguli okugcina izindaba eziphathelene nokwelashwa kwazo ziyimfihlo, abafowethu bafaka isicelo kuyi-European Court of Human Rights (ECHR [iNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu]).
Isinqumo: Ngo-June 6, 2013, i-ECHR yakhipha isinqumo esithi okwakushiwo umshushisi kwakwephula amalungelo ayisisekelo okugcina izindaba zabantu ziyimfihlo futhi yaqinisekisa ukuthi azikho “izizathu eziphathekayo” zokwembula izimfihlo zabantu eziphathimandleni. Lesi sinqumo asizange sishintshe ngoba ngo-October 7 uMkhandlu Ophakeme we-ECHR wenqaba isicelo seRussia sokudlulisa leli cala.—Avilkina and Others v. Russia.
Ukwaziswa Okwenezela Embikweni Wezomthetho Ose-Ncwadini Yonyaka Odlule
Uhulumeni waseFrance uvumile ukukhokha imali i-ECHR eyayithe ngo-July 5, 2012 awuyikhokhe ecaleni lokukhokhiswa intela engafanele. Usuyikhokhile imali owawuyithathe ngokungemthetho kanye nenzalo yayo, wakhokha nezindleko zokuqulwa kwecala futhi awusazibheki izakhiwo zegatsha njengezingezawo.—INcwadi Yonyaka Ka-2013, ikhasi 34.
OFakazi BakaJehova kwelaseNdiya bayaqhubeka bephikiswa ezindaweni ezihlukahlukene zezwe. Noma kunjalo, bebengakaboshwa noma bamangalelwe ngamanga njengasekuqaleni. Sikhuluma nje kunamacala angu-20 angakaqulwa okulungisa ububi obabenziwe kubafowethu.—INcwadi Yonyaka Ka-2013, ikhasi 35.
Thumelela Thumelela Umbiko Wezomthetho